MITOHY NY ORAMBE : Betsaka sahady ny lalana potika eto an-tampon-tanànan’i Mahajanga
Betsaka ireo lavadavaka mipoitra amin’ny lalana eto an-tampon-tanànan’i Mahajanga ankehitriny, taorian’ireny oram-be ireny. 12 janvier 2018
Ny lalana eo Mazava huile, mankeny Tsaramandoso iny dia efa feno lavaka tanteraka. Ireo lalana vao vita, toy ny mankany Ambondrona sy ny midina eo Ambalavola iny dia efa feno lavaka ihany koa.
Lavaka be ihany koa no tsy maintsy andalovana rehefa avy any amin’ny hopitaly manara-penitra ka ho any Tsaramandroso. Mitaraina ny mpampiasa lalana satria vao tsy ela no namboarina ireo lalana ireo nefa tsy mahavita taona akory dia efa lavaka sahady. Mbola maro anefa ny lalana tsy nokasihina mihitsy eto Mahajanga, toy ny eo Mahajanga be mandalo amin’ny Bni ka mivoaka any Mahajanga be iny. Ireo lalana maro ao Ampasika, izay lasa dobo mandavan-taona ka efa maitso mihitsy ireo rano miandrona eo, raha tsy hijery afa-tsy ny miditra eo amin’ny Viva teo aloha mankeny amin’ny biraon’ny Jirama.
Kaohin’ny riaka ny fasika sy fako
Saika toy izany avokoa ireo lalana any amin’ny faritra iva. Ho an’ny rehetra dia natao peta-toko sy tsy manara-penitra akory ny fanamboarana ireo lalana ireo. Ny ao Manjarisoa sy iny lalana mankeny amin’ny Soma beach ary ireo lalam-baovao ao Tsaramandroso ireo no mba hita fa nateza hatreto.
Tazana ihany koa fa feno fasika sy fako ny ankamaroan’ny lalana eto Mahajanga. Kaohin’ny riaka mantsy ny tany sy ny fako avy amin’ireo fokontany ambony toerana, toy ny Mangarivotra, Androva sy bloc administratif ary apetrany amin’ny lalana ety ambany. Lasa dongona eny ambony arabe ireo fasika ireo ka manembatsembana ny fifamoi- voizana.
Eo amin’ny fiolahana amin’ny Osiem, manoloana ny ivon-toerana pastoraly diosezianina, eo amin’ny Bonnet, akaikin’ny Bfv no tena ahitana izany. Raha ny tokony ho izy dia esorina avy hatrany ireo fasika ireo satria manimba ny lalana vita tara ao ambany ihany koa ; tsy ampy anefa ny finiavana sy ny hoenti-manana amin’ izany ka dia tazanim-potsiny aloha.